Ny Honor 9X dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 23 Jolay | Androidsis
Ny Honor 9X dia efa manana daty fampisehoana
Herinandro vitsivitsy lasa izay misy tsaho momba ny Honor 9X sy ny 9X Pro, izay ho voalohany amin'ireo marika manana Kirin 810. Toa manakaiky ny fandefasana azy, na dia mandraka ankehitriny aza dia mbola tsy misy vaovao momba hoe rahoviana isika no afaka manantena ireo finday avy amin'ny marika sinoa ireo. Soa ihany fa misy vaovao momba izany. Efa manana ny datin'ny fandefasana anao izahay.
Farafaharatsiny mba ho an'ny Honor 9X. Hatramin'izao dia tsy misy voalaza momba ny fisian'ny na fampisehoana ny Pro 9X.Fa farafaharatsiny fantatsika fa tsy mila miandry ela ny fahatongavany isika. Ity volana jolay ity ihany izao no ofisialy ity telefaona ity.
Ny 9 jolay ho avy izao ny fanolorana ny Honor 23X. Ka ao anatin'ny telo herinandro dia ho fantatsika ny momba an'ity telefaona vaovao an'ny marika sinoa ity. Amin'izao fotoana izao dia toa hetsika ho an'ny China izany. Ka mety hiandry ny volana septambra isika vao handefa ilay telefaona any Eropa.
Ity telefaona ity dia havoaka ao anatin'ny elanelan'ny marika. Mampanantena izy io fa ho lasa iray amin'ireo modely feno indrindra amin'ity fizarana ity. Ka azo antoka fa izany no mpivarotra tsara indrindra ho an'ny orinasa, izay nitombo nandritra ny roa taona. Na dia tsy manana antsipirihany momba izany aza izahay hatreto.
Misy ny vinavina momba ny fisian'i Kirin 810. Na dia tsy fantatsika aza raha ho ao amin'ity Honor 9X ity na amin'ilay maodely Pro noheverina. Na ahoana na ahoana, mba hampiasana ity processeur ity dia miatrika fitaovana mahaliana indrindra izahay, izay azo antoka fa hanome ady be ao ity eo afovoany.
Soa ihany fa hofoanana tsy ho ela isika. Ny Honor 9X dia ho ofisialy amin'ny 23 Jolay. Azo inoana fa amin'ity herinandro teo aloha ity dia hisy vaovao bebe kokoa momba ity fitaovana ity. Noho izany dia hitandrina izahay amin'ity lafiny ity momba izay fantatra momba io marika vaovao afovoan'ny marika sinoa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Honor 9X dia efa manana daty fampisehoana
Ilay iray tsy nisy intsony, ny Nokia Ion Mini, finday Android talohan'ny nahazoan'i Microsoft azy
Ny Asus ZenFone 6 dia mahazo fanavaozana vaovao miaraka amin'ny fanohanan'ny ARCore sy maro hafa